အစ္စတန်ဘူလ် မှာ ပြန်လာမယ် လို့ ဆိုလိုက်တဲ့ ကလော့ပ် - xyznews.co
ဥရောပ ရဲ့ အမြင့်ဆုံး ချန်ပီယံလိဂ် ဗိုလ်လုပွဲကြီး က ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ။ ဒီရာသီ ဖလား4လုံးမျှော်လင့်ချက်တွေ နဲ့ အစွမ်းကုန် တိုက်ပွဲ ဝင်ခဲ့တဲ့ ယာဂန် ကလော့ပ် ဟာ နောက်ဆုံး ပန်းဝင်ခါနီး2လုံး မှာတော့ မျှော်လင့်ချက်တွေ အကောင်းဆုံး ဖြစ်ခဲ့သည့်တိုင်အောင် အကောင်ထည် ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ပါဘူး။
မနေ့ညက ပဲရစ် မှာ ကစားသွားတဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ဗိုလ်လုပွဲ မှာ ဆိုရင် လီဗာပူး ဟာ ပွဲစလို့ မီးနစ် 30 အထိ တစ်ဖက်သတ် ထိုးဖောက် ကစားပြခဲ့သလို ၊ ရီးရဲ မက်ဒရစ် ကိုလဲ ဘောလုံး ပိုင်ဆိုင်မှု အသာစီး နဲ့ ကစားပြခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် ကစားသမားတွေ ရဲ့ ပွဲပန်းမှုက သိသာလွန်းခဲ့ ပါတယ်။
လီဗာပူး ဟာ တစ်ချို့ အခိုက်အတန့်တွေမှာ ကွင်းတစ်ဝက်လောက် ဖိပြီး ကစားနေတဲ့ အကြားက Tempo မြှင့် ကစားနိုင်ခြင်း မရှိသလို ၊ တစ်ချိန်လုံး တိုက်စစ်ဖွင့် ကစားခဲ့တဲ့ ရီးရဲ မက်ဒရစ်ကလဲ ဗိုလ်လုပွဲ ရောက်မှ ခံစစ်ကို ပိတ်ကစားခဲ့လို့ ဂိုးပေါက် ရှာဖွေနိုင်ဖို့ ခက်ခဲခဲ့ရပါတယ်။
အန်ဆယ်လော့တီ ဟာ ဝါရင့် နည်းပြပီပီ လီဗာပူး ကို ဘောလုံး ပေးကိုင် ကစားခိုင်းခဲ့သလို ၊ သူ့ရဲ့ အားသာချက် ညာတောင်ပံ ကနေပဲ တန်ပြန် တိုက်စစ်တွေ ပုံဖော်ဖို့ အတွက် အားပြုခဲ့ပါတယ်။ ဗီနီစီးယပ် နဲ့ ဘန်ဇီးမား အတွဲဟာ ချန်ပီယံလိဂ် ပြိုင်ပွဲ တစ်လျှောက် ခြေစွမ်းတွေပြခဲ့ပေမယ့် ၊ ဒီညမှာတော့ ဥရုဂွေး လူငယ် ကစားသမား ဗယ်ဗာဒီ ပိုပြီး ပေါ်လွင်ခဲ့ပါတယ်။
တောင်ပံ ကစားသမား စစ်စစ် မဟုတ်သည့်တိုင်အောင် အန်ဆယ်လော့တီ လိုချင်တဲ့ ပုံစံအတိုင်း ကာဗာဟယ် နဲ့ အတွဲညီညီ ကစားပြခဲ့တာက လီဗာပူး ရဲ့ ဘယ်တောင်ပံ ခံစစ်ကြောင်းကို ပြိုင်ဘက် အသင်းတွေထက် ပိုပြီး အလုပ်ရှုပ်စေခဲ့ပါတယ်။ ရီးရဲ မက်ဒရစ် ရယူသွားတဲ့ တစ်လုံးတည်းသော အနိုင်ဂိုးကလဲ ဗယ်ဗာဒီ ရဲ့ ကန်ချက်ကို ပိတ်သွင်းရင်း ရယူသွားတာ ဖြစ်ကာ ၊ မို ဆာလာ ရဲ့ အပိုင် အလုံးတွေကို ဆက်တိုက် ကာကွယ်ပြခဲ့တဲ့ ကော့တွိုက်စ် ရဲ့ လက်စွမ်းတွေ ကလဲ အဓိက ကျခဲ့ပါတယ်။
ဘယ်လ်ဂျီယံ ဂိုးသမားဟာ ဒီညမှာ အံ့အားသင့်စရာ ကောင်းလောက်အောင်ကို လက်စွမ်းပြခဲ့ပြီး ၊ ဗိုလ်လုပွဲ ရဲ့ အကောင်းဆုံး ကစားသမား ဆုကိုပါ ဆွတ်ခူးသွားခဲ့ပါတယ်။
လီဗာပူး နည်းပြ ကလော့ပ် ကတော့ ချန်ပီယံလိဂ် ဖလား နဲ့ လွဲချော်ခဲ့လို့ စိတ်ပျက်မိသည့်တိုင်အောင် ၊ သူ့ ကစားသမားတွေ အပေါ် ယုံကြည်မှု အပြည့်ရှိတာကြောင့် လာမယ့် ဘောလုံးရာသီမှာ ပြန်လာခဲ့မယ့် အကြောင်းကို အခုလို ထုတ်ဖော် ပြောဆိုသွားခဲ့ ပါတယ်။
“ အဝတ်လဲခန်း အတွင်းမှာတော့ ဘယ်သူကမှ ဒီရာသီကို ကောင်းကောင်း ဖြတ်ကျော် နိုင်ခဲ့တယ်လို့ လက်မခံနိုင်သေးပါဘူး။ ကျနော်တို့ဟာ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ပွဲမျိုးတော့ ကစားနိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ပါဘူး။ ချာတိတ်တွေလဲ အစွမ်းကုန် ကြိုးစားခဲ့တာပါပဲ။ အထူးသဖြင့် 1-0 အနေအထားမှာ ကျနော်တို့ လိုချင်တဲ့ ပုံစံမျိုးကို ပိုပြီးတောင် ကစားပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ကျနော့် မှာ ယုံကြည်ချက်က ခိုင်ခိုင်မာမာ ရှိပြီးသားပါ။ ကစားသမားတွေ အားလုံးက ပြိုင်ဆိုင်လိုစိတ် ပြင်းထန်ကြပါတယ်။ လာမယ့် လာရာသီမှာလဲ တောင့်တင်းတဲ့ ကစားသမား စာရင်းကို ပိုင်ဆိုင်လာဦးမှာပါ။
လာမယ့် ဘောလုံးရာသီ ချန်ပီယံလိဂ် ဗိုလ်လုပွဲက ဘယ်မှာ ကျင်းပမှာလဲ? အစ္စတန်ဘူလ်လား? ဟိုတယ်တွေ ဘွတ်ကင်း လုပ်ထားကြတော့ဗျာ” လို့ ပြောဆိုသွားခဲ့ ပါတယ်။
ကလော့ပ် ဟာ သူ့ရဲ့ ကစားသမားတွေ စိတ်ဓါတ် ကျမသွားစေဖို့ အတွက် “ဟိုတယ်တွေ ဘိုကင်း လုပ်ထားကြတော့ဗျာ” ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းမျိုးကို သုံးသွားတာ ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
တကယ်တော့ သူတို့ အသင်းဟာ ဒီရာသီမှာ ပြိုင်ပွဲပေါင်းစုံ မှာ ပွဲတိုင်းကို ပါဝင် ကစားခဲ့တာပါ။ ဒါကြောင့်လဲ ရာသီ ကုန်ခါနီးလေလေ ကစားသမားတွေ ရဲ့ ပွဲပန်းမှုတွေက ပိုပြီး သိသာလေလေ ဖြစ်ခဲ့ပြီး ၊ ဦးဆောင်ဂိုးတွေ ဆက်တိုက် ပေးခဲ့ရတဲ့ အကြားက ဒီအခြေအနေထိ ဟန်မပျက်အောင် ထိန်းထားနိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗီလာရီးရဲ နဲ့ အကြို ဗိုလ်လုပွဲ ဒုတိယ အကျော့က စလို့ ရာသီ အကုန်ထိ ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေ ထဲမှာ ချဲဆီး နဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ဗိုလ်လုပွဲ ကလွဲရင် ပွဲစဉ်တွေ အားလုံးကို ဦးဆောင်ဂိုးတွေ ခွင့်ပြုရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Previous Article အာဆင်နယ် အသင်း ချန်ပီယံလိဂ် ဝင်ခွင့်နဲ့ လွဲချော်ခဲ့တဲ့ အပေါ် စိတ်မကောင်း ဖြစ်နေတဲ့ အူဘာမီယန်း
Next Article ပွဲချိန် နောက်ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ရတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပရိသတ်တွေ အပေါ် အပြစ်ပုံချလို့ ဝေဖန်မှုတွေ ခံနေရတဲ့ UEFA